‘सरकार हामीलाई यहीं बस्न देऊ’ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १९ पुष २०७२, आईतवार
पुस १९ । काठमाडौं, ‘सीडीओ साब’, हाम्रो सरकार तपाईं नै हो । हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ने व्यवस्था हनुपर्छ’, विस्थापितका बस्तीमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसामु गोल्चे गाविस १ लिदीका ८० वर्षीय दुम्बल दोङले भने, ‘सरकारले हामीलाई पहिरोमा पुरिएर मर भन्न पाउँछ ? ’
भूकम्पपछि पहिरोको चपेटाले बर्सात्को सुरुमै गाउँ छाडेर झन्डै १३ घन्टा टाढा सेलाङ गाविसको बाँसखर्कमा बस्दै आएका दोङले चिसो बढेपछि विस्थापित परिवारका लागि राहतस्वरूप ब्ल्यांकेट लिएर गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीसँग सरकारले विस्थापितलाई त्यत्तिकै छाड्न नमिल्ने गुनासो गरे ।
त्रिपालको छाप्रोमा कठ्यांग्रिएर रात काट्नुपरेको पीडा सुनाउँदै दोङले आफ्नो नाममा लिदीमा भएको सबै सम्पत्ति लिएर भए पनि सरकारले अहिले बसेकै ठाउँमा बासको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने बताए ।
भएको जमिन पहिरोले बगाएपछि सुरक्षित ठाउँ खोज्दै गुम्बा गाविसको बोल्देबाट बाँसखर्क आएर बसेकी साङ्मो दोङ गाउँ फर्कने अवस्था नभएको बताउँछिन् ।
‘घर पनि छैन, जग्गा पनि छैन । त्यहाँ गएर पनि के गर्ने ? ’ उनको प्रश्न छ । सातजनाको परिवारसहित शिविरमा बस्दै आएकी रिस्नुमाया तामाङ भोकले मर्नुपरे पनि पुरानो थलो नफर्कने अडानमा छिन् । उनलाई त्यहाँ फर्किएपछि पहिरोले पुर्छ भन्ने त्रास छ ।
नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने ६० वर्षीया वाङ्जी दोङलाई पहिरोले बगाउन लागेको आफ्नो गाउँ फर्कनुपर्ला भन्ने चिन्ता छ । ‘भूकम्पमा बाँचियो । अब त्यहाँ गएर पहिरोमा पर्नु छ र ? ’ तामाङ भाषामा उनले भनिन्, ‘खेतीपाती पहिरोले लग्यो । घर भूकम्पले लग्यो । के गर्न जानु अब त्यहाँ ? ’ उनीजस्तै ६३ वर्षीया रिल्हामु दोङ खान नपाएर मरे पनि बाँसखर्क छाडेर लिदी नजाने अडान लिन्छिन् ।
भूकम्पले घरमात्र भत्काएन, सिंगो गाउँ धाँजा फाटेर पहिरोको चपेटामा पर्‍यो । बस्तीमा पहिरो लाग्न थालेपछि सुरक्षित ठाउँ खोज्दै १२ घन्टाभन्दा बढी हिँडेर बाँसखर्कमा आ श्रय लिइरहेकी रिल्हामु आफू मरे पनि परिवार जोगाउन यतै बस्नुपर्ने बताउँछिन् ।
बाँसखर्कमा आ श्रय लिइरहेका विस्थापितलाई त्रिपालले नथेग्ने शीत र हिमाली सिरेटोभन्दा कुन दिन सरकारले आ श्रय लिइरहेको ठाउँबाट निकाल्ने हो भन्ने त्रासले बढी सताएको छ ।
चिसो बढ्दै गएपछि हिमाली गाउँ बाँसखर्कमा बसेका विस्थापितका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरकारी टोली ब्ल्यांकेट वितरण गर्न गएको मौका छोपी सर्वसाधारणले बासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।
प्रायः सबैले बाँसखर्क नछाड्ने आशय देखाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायबउपरीक्षक विश्व कार्कीले बताए । भूकम्पपछि पहिलोपटक जिल्लाका उच्च तहका धेरै सरकारी अधिकारी आएको बेला गाउँलेले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए ।
भूकम्पपछि गुम्बाको बोल्दे, गोल्चेको लिदी तथा सेलाङकै विभिन्न गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै बाँसखर्कमा एक सय ८५ परिवार त्रिपालको छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन् । सरकारले जग्गा दिएर व्यवस्थित रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग बाँसखर्कमा बसेकाहरूको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट